Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Culus oo Kasocda Magaalada Ramaadi ee Dalka Ciraaq.
Dagaal Culus oo Kasocda Magaalada Ramaadi ee Dalka Ciraaq.
Posted by ONA Admin	/ December 27, 2015
Ciidamada dawladda Ciraq ooy taageerayaan duqaymaha cirka ee Maraykanku hoggaaminayo, ayaa kusoo dhawaaday xerooyinka dawladda ee magaalada Ramaadi, iyadoo wadooyinka ay kula dagaalamayaan kooxda ISIS (Daacish).
Afhayeen u hadlay ciidamada Ciraq, General Yaxye Rasool, ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq ay u jiraan kilimitir dhismaha dawladda. Wuxuu sidoo kale sheegay in mudnaantu tahay in laga fogaado waxyeelada nafeed.
Waxaa jira warar sheegaya in dukaamada ay sahaydi ka dhamaatay oo dadka deegaanka ay haysato cuno iyo biyo yari. Dagaalkan dambe, ayaa kuyimid ciidamda Ciraaq oo dhaqaaq xoogan sameeyay ooy dib ugu qabsanayaan magaalada oo gacanta kooxda ISIS gashay bishii May.